Mayelana nathi - Chongqing Kuhle Mechanical Co., Ltd
uhlelo Amafutha decoloring
umshini Amafutha Filtration
Yaqalwa ngo-2007, Chongqing Kuhle Imishini is onguchwepheshe ucwaningo kanye ukukhiqizwa imishini imfucuza uwoyela kabusha, imfucuza uwoyela ukuvuselelwa kanye cleaner filtration Equipments. Ngemva kweminyaka yentuthuko, Chongqing imishini umhlabeleli possesses nakho okucebisayo futhi ubuchwepheshe eliyingqayizivele. Inkampani ugxilisa ngokwako on ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye ukusizakala emkhakheni ukwelashwa uwoyela. Futhi ulokhu ekuthuthukiseni ngokwayo kabusha uwoyela lamafutha uhlanzekile zasendle eheha ingqondo kabanzi eziphambili uwoyela kabusha namafutha uhlanzekile ubuchwepheshe ekhaya aphesheya.
Amafutha imfucuza ukuvuselelwa (kabusha) machineries oluqanjwe Chongqing Kuhle Imishini kungaba eziqoshiwe esetshenziswa omnyama amafutha engine (kuhlanganise uwoyela udizili, uphethiloli amafutha engine) kanye nezinye izinhlobo samafutha angcolile kusuka abansundu esobala uwoyela base lube noma diesel segolide. Imishini kwase kuthengiswe emazweni amaningi kusukela empumalanga maphakathi, I-Asia, e-Afrika, futhi eningizimu Melika, njll
*P urpose ukuba ehamba phambili inkampani ukuphathwa samafutha angcolile futhi yakha lokuhweba eqinile ngokunikeza imikhiqizo izinga okusezingeni, inkonzo lomhlaba futhi senithandane isikhathi eside yesondlo kumakhasimende ethu
* S ervice: ukunikela ulwazi isikhathi kumakhasimende ethu. Letha kungekho emva ukudayiswa ukukhathazeka kumakhasimende.
* M ission isitatimende: ukwakha ubuhlobo eside eside namakhasimende ethu kanye namakhasimende ngokuphishekela ubuchwepheshe oluseqophelweni eliphezulu service quality.
* C ore ukubaluleka Sikholelwa ikhasimende ungunkulunkulu ubani okufanele ahlonishwe futhi aphathe eninokholo; Thina ukuhlanganisa ukwethembeka, ubuqotho, ibhizinisi izimiso zokuhle tonkhe tincenye ibhizinisi lethu ukusebenza. Thina sikhule ngokusebenzisa lokusungula, okusungulile kanye emisha.
* Imigomo Inwebisa ekhaya emakethe ukuba emhlabeni wonke, ukugcina ubuhlobo obuhle namakhasimende ekhona futhi Ukuthuthukisa entsha. Ubuchwepheshe Okuqhubekayo ekuthuthukiseni kanye emisha futhi ucwaninga ukuba abe nezwe odumile inkampani ukuphathwa samafutha angcolile.
Chongqing KAKHULU Mechanical imishini CO., LTD
Ucingo: +86 18983774129